अग्रगतिको अवरोधमा उत्पादित प्रवृत्ति
जीवनशक्ति आस्था र विश्वासमा अडिएको हुन्छ । निजी होस्, पारिवारिक वा राष्ट्रको जीवन सबै यसैबाट अघि बढेको हुन्छ । आस्थाको यसै भावभूमिबाट उत्पन्न उत्साह र उमङ्गले प्रगति र अग्रगतिलाई डो¥याएको हुन्छ । यसैले आस्थाको यस मनोभावलाई जागृत गर्नुपर्छ । यो जीवन शक्तिमाथिको प्रहारले अग्रगतिमा अवरोध पु¥याउँछ वा जीवनलाई समाप्त पार्छ ।
कहिलेकाहीँ अति उच्च आकाङ्क्षा तत्क्षणमै यथार्थमा रूपान्तरित नहु“दा व्यक्तिको आत्मविश्वास धर्मराउन थाल्छ । तर, ऊ द्वन्द्व र प्रतिद्वन्द्वयुक्त मनलाई सम्हाल्दै खडा हुन पुग्छ र भन्छ, “सूर्यको प्रकाशको गतिभन्दा तेज चाल भएको यो मेरो मनको गतिलाई यथार्थस“ग सामन्जस्य गर्नुपर्छ । ” यसरी मनभित्रका धेरै मनबीचका द्वन्द्वलाई मिलाउँदै व्यक्ति अगाडि बढ्छ । उसको आकाङ्क्षाले आफ्नो आकार ग्रहण गर्छ । मानिसका जीवनमा यस्ता प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छन् ।
मानिसका कुरा जस्तै देशका पनि कुरा हुन्छन् । नेपालका प्रगति र समृद्धिस“ग जोडिएर यस देशको इतिहासका कुरा पनि आउँछन् । यहा“का विभिन्न आर्थिक वर्ग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुदायका इतिहास– सङ्घर्षका कुरा पनि छन् । यस देशका पार्टी, तिनीहरूका इतिहास, चरित्र र तिनीहरूबीचमा हुने टकरावका कुरा पनि छन् । देशको भूराजनीतिक अवस्थिति र यसस“ग आकर्षित तथा विकर्षित हुने स्वार्थ सम्बन्ध एवम् तिनीहरूले पार्ने प्रभाव र चलखेलका कुरा पनि छन् । यी सबै चित्ररेखा नेपालको इतिहासको क्यानभासमा अङ्कित भएका छन् र थपिँदै जानेछन् । मात्र खाँचो छ, तिनीहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा संश्लेषणको ।
हाम्रो देशमा हीनता, निराशा, अविश्वास तथा अनास्था फैलाउने खेती योजनाबद्ध ढङ्गले विगतदेखि नै सञ्चालित हु“दै आएको हो । सकारात्मक कुरालाई उडाउने, कुनै नवीन प्रविधि, सोचको कुरा कसैले ग¥यो भने “यो नेपाल हो, यहा“ पनि सम्भव छ र ?” भनेर उछित्तो काढ्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । देशभित्र खोटमात्रै खोज्ने÷देख्ने र देशबाट पलायन भएर विदेशमा निकृष्ट काम पनि नाक फुलाएर गर्ने तर देशको कुरा गर्दा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति उच्चतहका ठानिने कतिपय नागरिकमा देखिएकै छ । यस्तै हीन, नकारात्मक मनोदशाले ग्रस्त, सधैँ देशलाई दोषी देख्ने व्यक्तिका कारणले पनि हो हाम्रो देशमाथि हुने गरेका बाह्य थिचोमिचो, नाकाबन्दी आदि । यस्तै हीन ग्रन्थीबाट आमनागरिकलाई मुक्त पार्न र आत्मविश्वास जगाउँदै देशको प्रतिष्ठा चौतर्फी रूपमा बढाउने विकासको सोच र योजना अघि बढाउनुभएको छ– नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । यद्यपि, देश र जनतामा स्वाभिमान जगाउने, देशको द्रुत गतिले विकास गरेर पचासौँ लाख युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउँदा उल्टै उडाइन्छ र जनतामा हीनभावको मलजल गरिन्छ । अब यस्तो हीनता फैलाउने प्रयत्नको पर्दा उघार्नुपरेको छ ।
निराशा र हीनताबाट चिन्ता उत्पन्न हुन्छ– आमनागरिकमा । जनतामा हतास, निराश भावना भरेर हीन मानसिकता उत्पन्न गराउने उद्देश्यले हरेक कुरालाई नकारात्मक रूपमा प्रसार गरिँदै छ । यस्ता प्रसारले जनतामा रहेको ऊर्जालाई समाप्त पार्छ तर यसका निम्ति हाम्रो देशको प्रतिपक्ष पार्टीलाई कसले मोहरा बनाएर प्रयोग गरिरहेको छ ?
हाम्रो देशको वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली का“ग्रेसमा कुनै विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । न त संविधान, न नागरिकता, न त सङ्घीयता, न धर्म, न त परराष्ट्र मामला वा आर्थिक विकासको मोडलका विषयमा– केहीमा पनि प्रस्ट नीति दृष्टि देखिँदैन । विगतमा फर्केर हेर्दा, वास्तवमा नेपाली का“ग्रेसले नेपालको इज्जत र गौरव राख्ने काम कहिल्यै पनि गर्न सकेन । यसले देशको पक्षमा कहिल्यै पनि दह्रोस“ग खुट्टा टेक्न सकेन । जनताले २०१५ सालमा का“ग्रेसलाई दुईतिहाइ स्थानमा विजय गराए तर सरकार चलाउन सकेन । व्यवस्था नै राजा महेन्द्रलाई बुझायो । २०४८ सालमा फेरि पूर्ण बहुमत दिए जनताले । दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै अड्तीसे र चौहत्तरे बनेर आफ्नै सरकार गिराएर मध्यावधि चुनावमा देशलाई पु¥यायो । मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भयो । एमालेको सरकारले काम थालेको तीन महिनामा नै गाउँ सहर सबै ठाउँका जनतामा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँको विकासले उत्साह उमङ्ग ल्यायो । जनतामा छाएको त्यो उमङ्ग देखेर काँग्रेस आत्तियो । छ महिना पनि धैर्यधारण गर्न सकेन । जनताले हराए पनि सत्तामा जसरी पनि बस्नैपर्ने प्रजातन्त्रका तथाकथित मसिहाले जनअभिमतको अपमान गरे । मनमोहन अधिकारीलाई हटाएर राप्रपास“ग मिलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाए । सांसद खरिद बिक्री, पजेरो संस्कृति, भ्रष्टाचार, माओवादी विद्रोह हिंसा आतङ्क सबै भिœयाइयो । जनतालाई निराश पारियो । देउवाले नै नेपाली का“ग्रेसलाई फोडेर आफ्नो हठ पूरा गर्नुभयो । अन्त्यमा सबै कुरा दरबारमा लगेर बुझाउनुभएको साक्षी पुस्ता छँदै छ ।
वर्तमान प्रतिनिधिसभामा पनि प्रतिपक्ष दलका नेता हुनुहुन्छ– शेरबहादुर देउवा । उहाँ नेपाली का“ग्रेस पार्टीका सभापति हुन्ुहुन्छ । संवैधानिक परिषद्का बैठकहरूमा उपस्थित हुनु प्रतिपक्ष दलका नेताको कर्तव्य नै हुन्छ तर देउवा बैठकमा जानुहुन्न । विभिन्न निहुँ पारेर संवैधानिक कार्य सम्पादनका कामलाई पछाडि धकेल्न चाहनुहुन्छ । सत्ताधारी दललाई अप्ठेरो पार्ने, असहयोग गर्ने र हरेक ठाउ“मा भागबन्डा माग्दै र खोज्दै हिँडेको बुझिन्छ । संवैधानिक परिषद्का बैठकमा नजानुका कारण पनि उहाँको यही भागबन्डाको राजनीति हो भनिन्छ । उहाँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सत्र समापन बैठकमा समेत जानुहुन्न । प्रमुख विपक्षी नेता यस्ता बैठकमा उपस्थित हुनु संसदीय परम्परा नै हो । यस्तै अन्य अति महŒवपूर्ण स्थान वा ठाउ“का बैठकमा पनि जानुहुन्न । तर उल्टो, सत्तापक्षले उपेक्षा ग¥यो भनेर गुनासो भने गरिरहनुहुन्छ । सत्तापक्ष अधिनायकवादी बन्यो भनेर अफवाह फैलाएर जनतालाई निराश पार्न उद्यत् हुनुहुन्छ ।
निर्वाचनको परिणाम आउन सुरु भएका दिनदेखि नै तिलमिलाउन थालेको नेपाली का“ग्रेस नेकपाको दुईतिहाइ नजिकको सङ्ख्या देखेपछि त झनै तिलमिलाउन पुग्यो । उसको अमनचैन हरायो र नेकपाभित्र चलखेलको षड्यन्त्र गर्ने दुष्प्रयत्नसमेत गर्न खोज्यो । यी सबै कुरा किन भए ? किनकि काँग्रेस पार्टीको न कुनै स्पष्ट दर्शन छ, न कुनै सिद्धान्त, न त कुनै विचारधारा । न त यसस“ग नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रमको ज्ञान, न त यस देशको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराको समझ नै छ । न त यससँग देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानप्रति नै संवेदनशीलता छ । किनकि उसको यो रोग जन्मकालदेखिकै हो । सत्यतथ्य २००३ माघ १२ र १३ गते यस पार्टीका अध्यक्षले गरेको भाषण र यस पार्टीले जारी गरेको घोषणपत्र पढे प्रस्ट हुनेछ ।
(लेखक, नेकपाका केन्द्रीय स्कुल विभाग सदस्य हुनुहुन्छ । )